Ree Ethereum maka Eversend | Paxful
Ree Ethereum jiri Eversend
Ka e si e ree Ethereum na Paxful
Paxful na eme ka ọ dị mfe maka ndị mbido na ndị ọkachamara inweta nnwere onwe ego. Ma ebe ọ bụ na anyị bụ ebeahịa n'esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ , ị nwere ike ree Ethereum (ETH) ozugbo nye nde ndị ọrụ n'ụwa niile na enweghị mkpa maka ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ!
Nke a bụ ihe ịkwesịrị ime:
Tupu ịmalite ị re Ethereum, ị ga ebu ụzọ mepụta ma nyochaa akaụntụ Paxful gị ma ọ bụ banye na nke gị. Ozugbo ịbanyela, soro nzọụkwụ ndị a:
Tinye usoro iwu gị - Kpebisie ike na ọnụọgụ ego kachasị elu nke ETH ịchọrọ ị re ma were usoro ọkwụkwụụgwọ ị họọrọ. Ị nwekwara ike itinye ego ịhọọrọ na ebe ị nọ ma ọ bụrụ na ọ masị gị.
Chọọ maka ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa - Ozugbo ị setịpụrụ usoro iwu gị, pịa Chọọ maka ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa iji hụ nhọrọ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa dị mma ị ga ahọrọ.
Nyochaa ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ahụ - Echefula inyocha nkọwa niile dị mkpa nke ọzụ ahịa gị gụnyere ọkwa nkwenye ha, ọnụọgụ nke azụmaahịa gara nke ọma, yana nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ, tupu ịga n'ihu.
Bido ahia - Ọ bụrụ na ịchọta ọzụụ nwere aha ọma, pịa Ree iji nyochaa usoro na ọnọdụ nke onye zụrụ ya. Ọ bụrụ na ị kwenyere, tinye ego nke ETH ị dị njikere ị ree wee pịa Ree Ugbu a. Nke a ga ewetara gị mkparịtaụka azụmaahịa ma nyefe ETH gị na ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị nwere nchebe na nwa oge .
Mezue ahia ahụ: Ozugbo ị natara ọkwụkwụgwọ ahụ ma ọzụụ mechaa njedebe nke ahia ahụ, ịnwere ike ịhapụ ETH site na ego edebere ruo na azụchaa ahị gaa na àkpa ego ha. Ị ga enwekwa ike ibudata akwụkwọ ọkwụkwụụgwọ ọha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdekọ ndekọ azụmahịa ahụ.
Hapụ nzaghachi - echefula ịgwa anyị ahụmịhe gị na onye ahịa gị mgbe azụmahịa gwụchara.
LeleeIhe omuma anyị iji mụtakwuo banyere otu esi ere ETH ozugbo. I nwekwara ike mepụta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtinye usoro nke gị ma ọ bụ ntuziaka azụmahịa. Egbula oge ịbịakwute ndị otu na akwado anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla. Ahịa oma!